भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि बन्नुअघि राष्ट्रपति ओबामाले के के गरे दिल्लीमा ? आणविक सन्धीमा दुई देश नजिक « MNTVONLINE.COM
भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि बन्नुअघि राष्ट्रपति ओबामाले के के गरे दिल्लीमा ? आणविक सन्धीमा दुई देश नजिक
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा तीन दिने भ्रमणको पहिलो दिन निकै व्यस्त रहे । तीन दिने भ्रमणका क्रममा आइपुग्नुभएका ओबामालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वयं विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेका थिए । यस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति ओबामाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । पहिलो दिन निकै व्यस्तताको दिन रह्यो ओबामालाई । दक्षिण एसियाली एक ठूलो राष्ट्र भारतसँग अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले द्वीपक्षीय हितकालगायत थप सम्बन्ध विस्तारका लागि आवश्यक छलफल गरे ।
भारत आएलगत्तै मोदी र ओबामाबीच नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा वार्ता भएको थियो । वार्ता अघि दुई नेताले चियाँ र खानासँगै खाए । हैदरावाद हाउसको बगैचामा बसेका ओबामालाई मोदीले कपमा चिया हालिदिएको भिडियो पनि संसारलाई चाखको बिषय बन्यो । ओबामा भारतको गणतन्त्र दिवसमा अतिथि बन्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । हैदरावाद हाउसको वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदी र ओबामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी बने । पत्रकार सम्मेलनमा मोदी र ओबामाले आफ्नो सम्बन्धबारे खुलेर कुरा गरे । मोदीले ओबामा आफ्ना मित्र भएको भन्दै दुई जनाले फोनमै एक अर्कालाई चुट्किला सुनाउने गरेको प्रसंग बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ओबामाले पनि हिन्दी भाषामै ुचले साथ साथु भन्दै मोदी र आफ्नो विशेष सम्बन्धको कारण भारत( अमेरिका सम्बन्ध नया“ उचाईमा पुगेको बताए । ओबामाले हिन्दी भाषामा ुमेरा प्यार भरा नमस्कारु भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका थिए । ओबामाले मोदीको प्रशंसा गर्दै भने,ुमोदी म भन्दा पनि कम सुत्छन् । मुख्यतः वार्तामा सिभिलियन आणविक उत्पादन सम्बन्धी विषयमा दुई देश सम्झौताको नजिक पुगेको बताइएको छ । सिभिल न्यूक्लियर कोअपरेशन नामक सहमति निकै लामो समयबाट रोकिएको थियो। करिब आठवर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको यस सहमतिमा दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ। त्यसअघि विविध गृहकार्यहरु पूरा गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम अनुसार नै आपूmहरु अघि बढ्न चाहेको ओबामाले जानकारी दिनुभएको छ । गरिबी निवारणको लागि मोदीको प्रयास देखेर म दंग छु ।ु उनले मोदी र आफ्नो प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मान्यताप्रतिको दृष्टिकोण समान भएको बताए । ुम र ओबामा साथी हौं । हामी फोनमै एक अर्कालाई चुट्किला सुनाउछौुं, पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भने,ुम नयाँ प्रधानमन्त्री भए पनि मलाई यत्ति थाहा छ, देशहरुबीचको सम्बन्ध ति देशको नेताहरुको सम्बन्धमा भर पर्छ ।ु अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले भारतलाई सदस्यता दिंदै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताए । मोदी र ओबाबीच कुरा गर्न हटलाइन स्थापना गरिएको छ भने दुइ देशको सेक्युरिटी एजेन्सीबीच पनि हटलाइनको व्यवस्था छ । ओबामा दम्पती मङ्गलबार साउदी अरेबिया जानुहुने छ । गत शुक्रबार बिहान निधन हुनुभएका साउदी अरेबियाका राजा अब्दुल्लाहप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उहाँहरु त्यहाँ जान लाग्नुभएको हो । यसै कारण ओबामा दम्पतीको ताजमहल भ्रमण रद्द गरिएको छ ।
अमेरिकी फष्र्ट लेडीलाई सय सारी दिने
भारत भ्रमणमा आउनु भएका अमेरिकी प्रथम महिला मिसेल ओबामालाई भारतीय सारी उत्पादनकर्ताहरुले हस्त निर्मित १०० वटा सिल्कको सारी उपहार दिने योजना बनाइरहेका एक स्थानीय व्यापारीले जानकारी दिएका छन् । मिसेल ओबामा तीन दिने भ्रमणको क्रममा उहाँका श्रीमान् अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओमाबासँगै आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली आइपुग्नु भएको हो । सारी उत्पादनकर्ताहरुले महिनौसम्मको कडा मेहनेतले सो सारीहरु तयार गरेको बताइएको छ । उपहार स्वरुप दिइने सारी भारतको प्रख्यात सहर बनारसबाट उत्पादन हुने अत्यन्त प्रचलित बनारसी सारीहरु रहने बताइएको छ । यस सारीहरु उत्पादनमा तीन दशकदेखि संलग्न रहेका परिवार एक सदस्य पेर्भेज माटिनले असली सुन र चाँदीबाट हस्त निर्मित सिल्क सारी रहेको बताउनु भएको छ । मार्टिनका अनुसार अत्यन्त सुन्दर र रङ्गीन यस सारीहरु एकको लागत एक लाख ५० हजार भारु अर्थात दुई हजार ४०० अमेरिकी डलर बराबरको रकम रहेको बताउनुभएको छ । यस्ता १०० सारी राष्ट्रपति ओबामाका साथमा आइतबार आउनु भएकी मिसेल ओबामालाई उपहार दिइने जानकारी दिइएको छ ।